Sei kuti iwe kuteerera yenyu nzvimbo Music musi Apple Watch uye chii kuti iwe uchagona kuteerera? All zvinhu zvaionekwa, kuti rinovimba pamusoro wako yokurinda womuenzaniso. Pano muchawana zvose zvakasiyana mabasa unogona kuita kushandisa kwako Apple Watch pasina aiwanzopiwa wokushanda kuna iPhone.
Any Apple Watch achimhanya watchOS 4.1 kana yakakwirira kuchakubatsira kuteerera kuunganidza uye Playlists akaita pamusoro wako iPhone . Unogona saizvozvo nomuimbirwo kuna mafomu akafanana Spotify uye iHeartRadio , sezvakanga Apple Music (kana uri mutsigiri).
An Apple Watch Series 3 kana Apple Watch Series 4 achimhanya watchOS 4.1 kana yakakwirira anogona kuita zvose zvataurwa pamusoro apa, asi anogona saizvozvo riine Apple Radio uye chero nziyo iwe vachiwirirana kumusoro kuburikidza iCloud.
Nepo vakawanda kwakarungwa mienzaniso aigona chete kuridza mumhanzi kuburikidza piggybacking kuburikidza iPhone wako, ari Series 3 uye 4 anogona kwariri mumhanzi pemurairo kubva gore. Sei pamusoro isu kutora gander panguva dzakasiyana-siyana pedyo kuti Teerera Music Kwenyu Apple Watch .
1 Use Apple Watch nokuda Music Vasina iPhone
Use Apple Watch nokuda Music Vasina iPhone
Segue kuti wachi wako. Press ari Digital Crown kuti dauka kuna Home chidzitiro. Vimba pamusoro Music kushanda. Kubvira, unogona pafiripi kuburikidza thumbnails akaunganidzwa ako akasiyana uye Playlists. Pane rimwe divi, pavanoshandisa pamusoro ndima Library uye pombi pamusoro pechikamu nokuda Playlists, Artists, Albums, kana Songs.
Iwe ungadai ipapo kukwanisa Rova zvakasimba kubudikidza assortments wagadzirisa pamwe varindi wako. Vimba pamusoro muunganidzwa, Playlist, mhizha, kana mutoo chaunoda dzinonzwa. Iwe unogona kudzora mimhanzi yako kubva pawachi yako nekukanda pane iyo Play / Chimbomira bhatani, bouncing zvinotevera njanji, kana hopping zvakapfuura njanji. Unogona saizvozvo kudzora vhoriyamu nokuramba ari Digital Crown.
Verenga nyaya ino zvinosanganisira mashoko zvakakwana pamusoro Sei Use Apple Watch nokuda Music Vasina iPhone. Pano muchawana zvose zvakasiyana mabasa unogona kuita kushandisa kwako Apple Tarisa pasina paired kune iPhone .
Dhawunirodha AnonyTun YePC [Windows 10, 8, 7 uye Mac]
DeskScapes YePC Windows 10/8/7 - Dhawunirodha Dzazvino Shanduro
Yakazodzwa Pasi: Download Facetime Tagged Na: Listen Music on Your Apple Watch without iPhone